6 Game-Kushandura SEO Mazano: Mabhizinesi Aya Akakura Organic Traffic kusvika 20,000+ Monthly Visitors | Martech Zone
Munyika yekutsvaga injini optimization (SEO), avo chete vakanyatsobudirira vanogona kujekesa izvo zvinotora kukura webhusaiti yako kune makumi ezviuru zvevashanyi pamwedzi. Izvi humbowo hwepfungwa ndihwo humbowo hune simba hwemhando yekushandisa nzira dzinoshanda uye kuburitsa zvinoshamisa zvemukati zvinozomira.
Nevazhinji vanozviti veSEO nyanzvi, isu taida kuunganidza rondedzero ine simba kwazvo kubva kune avo chete vakakwanisa kukura mabhureki avo uye kugamuchira anopfuura zviuru makumi maviri emwedzi kushanya. Takanga tichifarira muto wakavanzika yehukuru organic traffic, kuoneka kwepamusoro, uye yakasarudzika mhando mawebhusaiti.
Pazasi, isu tiri kusanganisira epamusoro matanhatu ekuchinja-mutambo SEO matipi kubva kumhando yepamusoro akakwanisa kuvaka mawebhusaiti ane mukurumbira anogashira mashoma makumi maviri emwedzi kushanya:
Gadzira mishumo uchishandisa proprietary data:
Imwe yevashanduri vedu vakuru vemutambo yaive kushandisa proprietary data ku buritsa mishumo izvo takazogovera kuvatori venhau. Takaona mawebhusaiti akawanda achishandisa data rinowanikwa pachena kugadzira mishumo uye kugovana nevatori venhau. Nekudaro, isu tinonzwa kuti proprietary data yakatonyanya kukosha uye ichaunza kufarira kwakawanda. Izvi zvinodaro nekuti huwandu hwehurumende hunowanikwa kune chero munhu, uye kazhinji nguva, vatori venhau vanosarudza kutora data revaridzi uye ruzivo rwakasiyana pamusoro pemishumo yakajairika.
Amra Beganovich, CEO, Amra naElma
Co-munyori zvinyorwa nevatungamiriri veindasitiri:
Patakatanga, takaenda kune vatungamiriri vazhinji veindasitiri nechikumbiro chekudyidzana kune vanyori zvinyorwa kana kuita mabvunzurudzo emamwe emhando yepamusoro midhiya mabhuku, mablogiki, uye mamwe mawebhusaiti epamusoro. Taiziva kuti vazhinji vavo vaive neruzivo rwakasiyana uye nzwisiso yeimwe indasitiri yaizokosheswa zvakanyanya nemabhuku akawanda. Saka vazhinji vavo vakabvumirana nemhando iyi yekubatana sezvo ivo vaigamuchira kuwedzera kuoneka uye PR.
Takanangana nevatungamiriri vakaita sevanopesvedzera, mablogger, vanyori, vaimbi, uye kunyangwe vatori venhau vaida kusimudzira mabhizinesi avo. Vazhinji vevapepeti vewebhusaiti vakasvetukira pamukana wekugamuchira zvega zvemukati. Yakanga iri win-win situation.
Ipa mawebhusaiti ane mukurumbira akasarudzika zvinhu:
Hapana chinokunda chikamu chakanyorwa chakasarudzika nemunhu ari mukati meindasitiri. Isu hatina kumbotya kuisa mubasa uye kungonyora zvinyorwa zvemawebhusaiti ane chiremera muindasitiri yedu. Chinokosha ndechekutarisa pakuziva chaizvo vapepeti uye kunzwisisa zvavari kutsvaga. Kana iwe ukagadzira iyo mhando yezvinyorwa inonyatsokodzera vaverengi vavo, vanozogara vachizviburitsa. Rimwe zano nderekugara uine hunhu, kurumidza kupindura, uye ratidza mupepeti kuti uri mumhando yepamusoro pamusoro pehuwandu.
Sara Routhier, Mutungamiriri weZviri mukati, dzokorora (Kambani yevabereki ve AutoInsurance)
Tanga neiyo niche indasitiri:
Isu taida kugadzirisa niche indasitiri uye tozviita nenzira inobatsira uye inovimbika. Isu tiri mu tech uye makore masevhisi chikamu, uye isu takatarisana chete nekuvaka mukurumbira wakanaka mukati meindasitiri yedu.
Takanga tisina kumbofarira kuva zvinhu zvose kuvanhu vose. Pane kudaro, chinangwa chedu chikuru chaive chekusvika kune vanofarira maindasitiri vakagovana zvatinoda uye vakanzwisisa hunyanzvi hwedu. Mupfungwa dzedu, kushambadzira kwakanakisa ishoko-re-muromo mhando yekushambadzira, uye ese ekuwedzera migove atakagamuchira kubva kuvaverengi vedu imwe bhonasi.
Adnan Raja, Mutevedzeri weMutungamiriri weKushambadzira, atlantic.net
Shandisa yakasarudzika magirafu:
Isu takavavarira kutaurirana pfungwa dzakaoma kunzwisisa tichishandisa yakapusa magiraidhi uye zvinoonekwa. Isu takazvipira aya magirafu kune chero mupepeti aida kuvandudza zvirimo. Mukuchinjana, takakumbira kuti vape chikwereti chete. Takatora nguva yekufunga magiraidhi uye mavhidhiyo akagadzirwa nehunyanzvi epasirese vatinoshanda navo kuti vabatsire kubudirira mumashambadziro avo eSEO.
Trade uye network:
Takawedzera hukama hwedu nevapepeti kuti tipe mamwe mabhizinesi mukana wekunyora pamwe chete kana kutengesa zvinorehwa nenhau mune zvimwe zvinyorwa zvepamusoro. Isu takaisa mari mukugadzira network yemabhizinesi nevatapi venhau, uyezve takatengesa mikana nevamwe varidzi vebhizinesi. Chinokosha apa ndechekugara mukati meimwe indasitiri uye kuchengetedza yakakwira mwero. Kutengeserana kunoshanda chete kana kuchiitwa nemamwe mabhizinesi emhando yepamusoro kana zvinyorwa. Iko hakuna kukurumidza-kugadzirisa. Zvaiva zvese zvekugadzira kuhwina mamiriro.
Janice Wald, CEO, Kazhinji Blogging
Iko hakuna mapfupi ekuvaka yakasarudzika brand ine yakakwira organic traffic. Zvinotora nguva, zano, uye kunze-kwe-kwe-bhokisi kufunga. Nekutarisa pane zvakakura zvemukati, hukama hwekudyidzana, magiraidhi, uye kubvunzurudzwa kwechiremera, mhando dzinogona kubatsira kuronga nzira yakazara yekuisa uye kugamuchira makumi ezviuru zvevashanyi pamwedzi. Nekutevera mamwe erairo riri pamusoro, makambani anogona kutanga kuita shanduko dzinoenderana dzinozochinja nekufamba kwenguva mabhureki avo, traffic, uye mari.
Tags: adnan rajaAmra & elmaAmra BeganovichautoinsuranceBacklinkbrand24co-authorContent Marketingakasarudzika zvemukatiGraphicsmukurumbira wakakwirirajanice waldmichal sadowskikunyanya kublogasamambureniche industrydzokororaSara routierSearch Engine Optimizationseotrade content